२ सातामा चिकित्सकविरुद्ध प्रदर्शन तथा आक्रमणका ६ ठूला घटना, किन भइरहेको छ यस्तो ? – Health Post Nepal
२ सातामा चिकित्सकविरुद्ध प्रदर्शन तथा आक्रमणका ६ ठूला घटना, किन भइरहेको छ यस्तो ?
२०७६ असार ६ गते ११:०९
जेठ १४ गते, मंगलबार, रातको करिब १० बजे, हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत डा. वन्दना अधिकारी आकस्मिककक्षमा बिरामी हेर्दै थिइन् । एकजना गर्भवती महिला आफन्तको साथमा पेटको दुखाइ उपचारका लागि आइपुगिन् । करिब ३ दिनदेखि यौनिबाट रगत बगेका कारण छिटै उपचार गरिदिन आग्रह गरिन् । तर, अस्पपतालमा रातिको समयमा भिडियो एक्स–रेसेवा नभएको र गर्भवतीलाई अनुमानका भरमा औषधि गर्न नमिल्ने भन्दै सम्भव भएको उपचारसेवा दिएर डा. वन्दनाले सेवा उपलब्ध अन्यत्र लगेर उपचार गराउन आफन्तलाई सल्लाह दिइन् ।
हेटौँडा अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुने भएपछि आफन्तले बिरामीलाई अन्यन्त्रै लगे । अन्य अस्पतालमा समेत रातको समयमा उपचार सम्भव नभएपछि पुनः हेटौँडा अस्पताल फर्किएका आफन्त किन उपचार नहुने भन्दै आक्रोशित भए । डाक्टरले सम्झाउन खोज्दाखोज्दै बिरामीका ससुरा परमानन्द मिश्र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपशब्द बोलेर, हातपातको प्रयास गरेर मात्र रोकिएनन्, डा. वन्दनामाथि टुल प्रहार गर्ने हदसम्म प्रस्तुत भए ।
रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका–५ का प्रकाश बस्नेतका १४ महिने छोरा युदिन बस्नेतकोे उपचारका क्रममा ज्येग १६ गते साँझ ७ः३० मा ज्यान गयो । उपचारका क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि भरतपुर अस्पताल बिहीबार रातभर तनावग्रस्त भयो ।
कडा ज्वरोपछि १४ गते नै अस्पतालमा भर्ना गरिएका बालकको आमाको दूध सर्किएर ज्यान गएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको थियो । परिवारजनले भने चिकित्सकको लापरबाहीले बालकको ज्यान गएको दाबी गरेका थिए । उक्त घटनाले अस्पतालमा तोडफोडसमेत भयो ।
जेठ २७ गते, सोमबार, रातिको साढे ११ बजे, सिन्धुली अस्पतालमा ड्युटी सकेर क्वार्टरमा आराम गरिरहेका डा. दिवस ढकाललाई ड्युटीमा रहेका चिकित्सकले फोन गरे । डाक्टरको फोनपछि उनी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्दा एक गर्भवती महिला रोइरहेकी, कराइरहेकी अवस्थामा थिइन् ।
आकस्मिक मानसिक समस्या लिएर एक गर्भवती महिला डेढ घण्टाअघि राति करिब १० बजे अस्पताल ल्याइएकी थिइन् । बिरामीको अवस्था बिग्रिँदै गएको तर अस्पतालमा थप उपचार सम्भव नभएकाले जतिसक्दो छिटो अन्यन्त्रै अस्पतालमा लगेर बिरामीको उपचार गराउन सल्लाह दिँदै रेफर गरियो । तर, बिरामीको आफन्तले अन्य अस्पताल लाग्न ढिलो गरेको देखेर डा. ढकालले छिट्टै अन्यन्त्र लान सल्लाह दिँदा उनले आफन्तबाट दुव्र्यवहार सहनुपर्यो ।
सिन्धुली जिल्ला कमलामाई १० का कृष्ण बस्नेतले डा. ढकाललाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै ‘तेरो अस्पतालमा राख्न नपाउने हो ? तँलाई सिन्धुलीमा बाहिर निस्कन मन छैन ? भन्दै धक्का दिएर हातपातसहित तल्लोस्तरको गालीगलौज गरे ।
जेठ १६ गते शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराइएकी अमरगढी नगरपालिका–६ छचोडाकी २६ वर्षीया गीता ताम्राकारको शुक्रबार दिउँसो डडेल्धुरा अस्पतालमा मृत्यु भयो । घटनापछि अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडकमा मृतकका आफन्तले प्रदर्शन गरे ।
ताम्राकार ३१ गते बिहान साढे ८ बजे अस्पताल पुगेकी थिइन् । १४ दिनसम्म रक्तश्राव नरोकिएपछि उनलाई शुक्रबार अस्पताल लगिएको थियो, तर चिकित्सकले ढिला भइसकेको भन्दै काठमाडौं रेफर गरेका थिए । सोही दिन पनि सुरुमा चिकित्सकले जाँच गरेर ताजा रगत नभई पाठेघरमा पुरानो जमेको रगत बगेको बताएको पीडित पक्षको भनाइ छ । सोही दिन दिउँसो बिरामीको अवस्था झन् बिग्रिएपछि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लैजान सल्लाह दिइएको थियो । तर, साँझ साढे पाँच बजे गीताको मृत्यु भयो । बिरामीको अवस्था गम्भीर हुँदासम्म परिवारका सदस्यलाई जानकारी नदिएको र चिकित्सकले रेफर गर्न नमानेका कारण अप्रेसनमै त्रुटि भएको भन्दै आफन्त आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिनका लागि विशेषज्ञ टोली पठाइदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी मृतक महिलाको शवको पोस्टमार्टम जिल्लाबाहिरका चिकित्सकबाट गराउने र मृतकका आफन्तलाई नियमानुसार राहत उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि स्थिति केही शान्त भएको थियो । तर, आइतबार अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुको साटो उल्टै आफूहरुलाई धम्की दिँदै गैरजिम्मेवार प्रस्तुति दिएको भन्दै अनिश्चितकालका लागि सामूहिक बिदा बस्न निवेदन दिएसँगै घटना बल्झिने देखिएको छ ।
जेठ २९ गते बुधबार दिउँसो साढे २ बजे टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेका असर्फी यादव, किसनकुमार यादव, हीरालाल यादव, रामनिवास पासी र प्रवीण यादवलाई उपचारका लागि शिवराज अस्पताल ल्याइएको थियो ।
बिरामीको उपचार भइरहेकै वेला शिवराज नगरपालिकाका रविदत्त मिश्र, कृष्णनगरका शिवकुमार गुप्ताले अस्पतालको शल्यक्रियाकक्षभित्रै प्रवेश गरी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
माइनर ओटीमा प्रवेश गरी केही व्यक्तिले अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि तथानाम गालीगलौज, अभद्र व्यवहार र हातपात गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
जेठ २४ गते, शुक्रबार, पित्तथैलीको पत्थरी भएकी ५० वर्षीय रामप्यारी थापाको काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा अप्रेसन भएको थियो । पित्तथैली झिक्ने अप्रेसन भएको एक सातापछि अस्पतालले थापालाई मृत घोषणा गर्यो ।
मृत घोषणापश्चात् चिकित्सक तथा अस्पतालको लापरबाहीका कारण शल्यक्रियाका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलनमा उत्रिए, अस्पताल तनावग्रस्त बन्न पुग्यो ।
ड्रिल गरेर अप्रेसन गर्दा मेसिनले सानो आन्द्रा छेडेको र सर्जनले त्यसलाई नटालीकन बन्द गरिदिँदा शरीरभर संक्रमण फैलिएर बिरामीको मृत्यु भएको अस्पतालकै घटनाबारेको ब्रिफिङमा उल्लेख छ । मृतकका आफन्तले चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे ।
अप्रेशनको भोलिपल्ट शनिबार बिरामीको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, मुटुको धडकन बढ्ने, छातीमा निमोनिया तथा विभिन्न अंगमा संक्रमण फैलिनेलगायत समस्याका कारण अवस्था बिग्रिँदै गएपछि सर्जनले आइतबार अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यानलगायत चेकजाँच गराउँदा पनि कुनै गडबडी नपाइएपछि सर्जनले अप्रेसनका क्रममा दूरवीन छिराउन पारिएको प्वालमध्येको एउटाको टाँका खोलेर हेर्दा त्यहाँबाट फोहोर निस्किएको देखेपछि बल्ल आन्द्रमा प्वाल परेको थाहा भएको अस्पतालको भनाइ छ ।
तर, आफन्तले भने सर्जनले अप्रेसन सकेलगत्तै आफूहरुलाई बोलाएर अप्रेसनका क्रममा मासु च्यात्तिएको जानकारी दिँदै ठिक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । सर्जनलाई आन्द्रा काटिएको जानकारी अप्रेसनका क्रममै भए पनि उनले बेवास्ता गरेका कारण संक्रमण फैलिएर बिरामीको मृत्यु भएको आफन्तको भनाइ छ ।
यी भए दुई साताभित्र सार्वजनिक भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालविरुद्ध सेवाग्राहीको आक्रोशका प्रतिनिधि घटना । यस्ता घटना दिनप्रति घटिररहेका छन् । किन यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदै गएका छन् । बिरामीको मुत्युको विषयलाई लिएर बिरामीका आफन्तले गरेका अस्पताल तोडफोड तथा अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि बिरामीका आफन्तले गर्दै आएको हातपात तथा अपमानजनक व्यवहार दिनहुँ बढ्दै गएका छन् । किन डाक्टर र बिरामीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकिरहेको छैन ? राज्यको कानुन र सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर भएका कारण यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदै आएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बिरामी र डाक्टरबीच सुमधुर सम्बन्धको आवश्यकतालाई हेरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडीको नीति ल्याएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डीन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार बिरामी र डाक्टरका बीच हुने केही समस्यालाई समधान गर्नका लागि वा कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न तालिमका माध्यमबाट ज्ञान र सीपको दिनुपर्छ ।
‘बिरामीले अस्पतालमा डाक्टरमाथि गर्ने अपमानजनक व्यवहार पूर्णतः गलत हो,’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘स्वास्थ्योपचारमा सेवाग्राहीलाई चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने कानुनी बाटो अपनाउनुपर्छ ।’ बिरामीको मुत्युमा आफन्तले लापरबाहीको संज्ञा दिए पनि बिरामीको गम्भीर अवस्था, अस्पतालमा साधन–स्रोतको कमी, व्यवस्थापनको कठिनाइजस्ता कुराले प्रभाव पारेको हुन सक्ने डा. अग्रवालको भनाइ छ ।
चिकित्सक संघले यस्ता विषयलाई लिएर विज्ञप्ति निकाल्दै सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने कार्य गरिरहेको र आवश्यक परेको खण्डमा अझै कडाखालको आन्दोलनमा उत्रने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । घटनाको कानुनी रूपमा छानबिन भई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा राज्यले वा जनप्रतिनिधिले कानुनी बाटो नअपनाएका कारण यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदै गएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुख्य रुपमा राज्यले नै यस्ता घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याएको छैन ।’
चिकित्सक वा अस्पतालविरुद्ध लागेको आरोप छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्यक्षतामा ५ जनाको टोली रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार दिलीप शर्मा बताउँछन् । छानबिनका क्रममा चिकित्सकको लापरबाही भएको देखिन आएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने शर्माको भनाइ छ । डा. शर्मा भन्छन्, ‘नेपाल मेडिकलमा काउन्सिलमा आएका उजुरीका आधारमा काउन्सिलले छानबिन गर्दै आएको छ । छानबिनका क्रममा आएका दोषी सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
चिकित्सकविरुद्ध आक्रमणका घटना